Yini ongayibona edolobheni lase-Italy laseSirakuse | Izindaba Zokuhamba
Yini ongayibona edolobheni lase-Italy laseSirakuse
USusana Garcia | | Italia
Lona Idolobha lase-Italy eliseSicily Yindawo evakasha kakhulu lapho ngeGrisi yasendulo kwakuyisikhungo samasiko. Leli dolobha laliyikoloni lesibili lamaGrikhi ukusungulwa ngemuva kukaNaxos. Ifa lawo elimangalisayo likwenze kwaba ukuvakashelwa okuthakazelisayo lapho sihambela isiqhingi saseSicily.
Uma ufuna ukwazi ongakwazi vakashela ubone edolobheni laseSirakhuse, sikutshela konke esingakwenza. Indawo lapho kudlule khona amaGrikhi, amaRoma, ama-Arabhu noma amaByzantine. Ngaphandle kokungabaza singachitha izinsuku ezimbalwa sijabulela imigwaqo yaso.
1 Isiqhingi sase-Ortigia
2 UCastelo Maniace
3 I-Piazza del Duomo
4 Umthombo wase-Arethusa
5 Imakethe yaseSirakuse
6 Imbobo yeSirakuse
7 Ipaki lemivubukulo laseNeápolis
8 Amathuna amathuna aseSan Giovanni
9 IPaolo Orsi Archaeological Museum
Isiqhingi sase-Ortigia yiyona ingxenye yakudala yedolobha futhi ngaphandle kokungabaza iyindawo ethandeka kakhulu. Kuyisiqhingi esixhunywe ngamabhuloho amabili. Yindawo ethule kakhulu, ngoba ukuyilondoloza sekutholakele ukuthi iningi labahamba ngezinyawo. Izakhamuzi ezithile kuphela ezingangena kule ndawo ngezimoto zazo. Ngaphakathi kule ndawo kufanele uvumele ukuthwalwa yimigwaqo yayo ukuthola wonke amakhona, njengoba kuyindawo ebizwa nge-UNESCO njengeNdawo Yamagugu Omhlaba. Kule ndawo kukhona iPiazza del Duomo, iHypogeum noma iThempeli lasendulo lase-Athena.
Esiphethweni se- Isiqhingi i-Ortigia sitholakala eCastelo Maniace, engavakashelwa kuphela ekuseni. Le nqaba yasetshenziswa njengenqaba yokuzivikela ekuhlaselweni ulwandle kusukela ngekhulu le-XNUMX. Ungabona ngaphakathi futhi kuthatha cishe ihora. Ngaphezu kwalokho, inemnyuziyamu encane engaba nentshisekelo, yize okuthandwa kakhulu ngale nqaba imibono yayo yolwandle.
I-Piazza del Duomo
La I-Piazza del Duomo Ingenye yezindawo ezimaphakathi kakhulu edolobheni, ezisesiqhingini sase-Ortigia, edolobheni lakhona lakudala. Esigcawini ungabona futhi i-duomo, okuyilokho okubizwa ngokuthi isonto lombhishobhi lomuzi. Yindawo yabahamba ngezinyawo ezungezwe izakhiwo ezindala ezinamatshe aphaphathekile agqama ngobuhle bazo. Esigcawini akukho nje kuphela i-cathedral kepha kukhona nePalazzo Beneventano noma isigodlo sika-Archbishop's Palace.
Endaweni engasogwini ye-Ortigia yiyona Umthombo wase-Arethusa, ebastion ebusa itheku nogu. Lo mthombo uhlobene kakhulu nezinganekwane, ngoba kuthiwa unkulunkulukazi u-Arthemisi wawenza waba ngumthombo ukuze akwazi ukuphunyuka ekuhlukunyezweni ngu-Alpheus ngokocansi. Le nganekwane izungeze umthombo wokuthi namuhla indawo evakashelwa kakhulu izivakashi ngobuhle bayo nangokushona kwelanga okuhle okungabonwa lapho ikhona.
Uma kunendawo eyiqiniso kuleli dolobha, ngokungangabazeki imakethe, indawo lapho ungazama khona konke Imikhiqizo ejwayelekile yaseSicilian. Le makethe iyindawo ehehayo impela, inama-awning ayo abomvu nemikhiqizo egcwalisa umoya ngazo zonke izinhlobo zephunga. Ungazama izinto zokusetshenziswa futhi ngokuqinisekile uzolingeka ukuba uthenge izinto eziningi. Yindawo enhle ukuhlangana nabantu bayo.
Enye yezinto ezinhle kakhulu evakashelwa edolobheni itheku lalo, ebaluleke kakhulu empilweni yabantu bayo. Yindawo enhle njengasemakethe, enezinhlamvu ezinhle zasolwandle nezindawo zokuhamba.
Ipaki lemivubukulo laseNeápolis
Lona indawo ebaluleke kakhulu yemvubukulo yaseSirakuse. Kule ndawo uzovakashela i-Greek Theatre, i-amphitheatre yamaRoma kanye ne-Ear of Dionysus edumile.
ILa Oreja de Dionisio ngumhume wemvelo edwaleni le-limestone egqumeni laseTemenitas. Njengoba iqiniso ukwazi, kufanele kushiwo ukuthi leli gama sakhiwa umdwebi odumile Caravaggio. Izivakashi ikakhulukazi zijabulela imisindo emikhulu ngaphakathi komhume.
Amathuna amathuna aseSan Giovanni
Lezi ama-catacombs okunye ukuvakashelwa okunconywayoKuyamangaza ukuthi inkulu kangakanani, inezimpambana mgwaqo nemigwaqo engaphansi komhlaba ebekelwe ukungcwaba. Ngaphakathi akukho okusalile, kuphela isikhala esakhiwe amathuna, kwazise aphangwa emakhulwini eminyaka adlule. Ububanzi bamathuna amakhulu bukhulu kangangokuba kunenganekwane ethi uthisha enabafundi bakhe waduka kubo ngesikhathi engena kubo wangakuthola ukuphuma. Endaweni yawo eyinhloko ungabona ezinye izingqimba zomsele wamanzi wakudala owawusetshenziselwa ukwakha imigede yokungcwaba.
IPaolo Orsi Archaeological Museum
Yilokho Imyuziyamu yesifunda iSyrause, ingomunye weminyuziyamu eyinhloko yemivubukulo eYurophu. Ngaphakathi emnyuziyamu ungabona okutholakele emlandweni, kusukela ezikhathini zamaGrikhi noma zamaRoma. Ihlukaniswe imikhakha eminingana engavakashelwa ukuze ifunde ngenkathi yamaGreki, okutholwe yiSyrause noma umlando wangaphambilini.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Italia » Yini ongayibona edolobheni lase-Italy laseSirakuse
UJerez de los Caballeros